'मनमा जस्तो तरंग हुन्छ, मस्तिष्कले त्यसरी नै काम गर्छ' - Dainik Online Dainik Online
‘मनमा जस्तो तरंग हुन्छ, मस्तिष्कले त्यसरी नै काम गर्छ’
प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ८ : ०७
काठमाडौं । मानवजातिको सभ्यताको सुरुआतदेखि नै अर्थात् सनातन वैदिक कालदेखि नै जब मानिसले इनोभेसन गर्दै गयो, मानिसले खोज गर्दै गयो, त्यस क्रममा जीवन के हो? जगत के हो ? म को हुँ, कहाँबाट आएँ? किन छु? कहाँ जान्छु? समग्रमा मेरो वास्तविक अस्तित्व के हो? आदि जिज्ञासाहरू आए।
माइन्ड भनेको के हो, ब्रेन भनेको के हो, बडी भनेको के हो, स्प्रिट भनेको के होरुभनेर सधैं उल्झनको अवस्था छ। यसलाई हामीले बुझ्दाखेरि योगको भाषा, अभ्यात्मको भाषा र विज्ञानको भाषा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। विशाल अभिव्यक्ति छ यसको। आत्मामा शरीर बन्छ, शरीर पनि त्यहीँ डिजल्भ हुन्छ, विचार बन्छ, विचार पनि त्यहीँ डिजल्भ हुन्छ, श्वास पनि बन्छ, त्यहीँ डिजल्भ हुन्छ, ब्रेन पनि बन्छ, त्यही डिजल्भ हुन्छ। एभ्री थिङ्स इमर्ज एन्ड कोल्याप्स इन्टु द ब्रह्म, इन्टु द कन्सस्नेस, इन्टु द सोल, इन्टु द कुटस्थ कन्सस्नेस। यो निष्कर्ष अध्यात्मले धेरै पहिले नै दियो। यस विषयमा हाम्रा वैदिक मनिषीहरुले धेरै गम्भीर अनुसन्धान गरिसकेका छन्।
समुद्रको गहिराइमा हे¥यो भने त्यहाँ शान्त हुन्छ, त्यस्तै गरेर हाम्रो आत्मा तत्त्व, ब्रह्म तत्त्व र हामीभित्रको मौन तत्त्व छ। मौन तत्त्वमा बेलाबेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि तरंग आउँछन्। तरंगको पहिलो कण भनेको मन हो। मनबाटै यी सबै कुराहरु ब्रेन, हर्ट, किड्नीलगायत टिस्यु, सेल, मोलिक्युल आदि त्यसबाटै बन्दै जान्छन्।
(योगगुरु ब्रह्मश्री मित्रसँगकाे कुराकानीमा आधारित)